Nnwom 13 - Akuapem Twi Contemporary Bible (AKCB)
1Awurade enkosi da bɛn? Wo werɛ befi me afebɔɔ ana?
Enkosi da bɛn na wode wʼanim behintaw me?
2Enkosi da bɛn na mene mʼadwennwene bedi aperepere
na awerɛhow ahyɛ me koma mu daa?
Mʼatamfo nni me so nkonim nkosi da bɛn?
3Twa wʼani hwɛ me na bua me, Awurade, me Nyankopɔn.
Ma mʼani so nyɛ hann, na manna owu nna.
4Me tamfo bɛka se, “Madi ne so nkonim.”
Na mʼahohiahiafo bedi ahurusi bere a mahwe ase.
5Nanso mede me ho to wo dɔ a ɛnsa da no so;
me koma di ahurusi wɔ wo nkwagye mu.
6Mɛto dwom ama Awurade,
efisɛ ɔne me adi no yiye.
AKCB : Nnwom 13